8 Kutonhorera Wiricheya Zvipfeko zvevana uye mawiricheya avo
Posted on October 7, 2013 November 20, 2020 by csr 1687
Halloween inguva inofadza yegore kuvanhu vazhinji, kunyanya kuvana, sezvavanotarisira kune rimwe remazuva avo avanofarira egore.
Halloween inopa mukana wekuti mwana afungidzire kumhanya musango uye hapana muganho kuhuwandu hwekugadzira hunogona kuratidzwa muhembe.
Kana zvasvika pazviri, chii chinonzi husiku hweHalloween, kana pasina vana vemuvakidzani vachinyemwerera nekuseka ivo vachiunganidza huwandu hwakawanda hwemanomano uye kubata. Ini ndaunganidza mashoma mafoto pano anogona kukupa mamwe mazano mune izvo zvaungade kuitira Halloween, kana mafoto aya asingakuite kuti uende "Awww", saka handizive kuti chii chichaita.
Vanhu vanowanzo kurasa pfungwa yemwana pane wiricheya kukwanisa kuve nekungonakidzwa zvakanyanya pazuva rino rakakosha, asi iwo unongova maonero anotyisa. Unogona kuratidza kungogadzira kwakawanda pa wiricheya paHalloween, kunyanya nemazano mazhinji akatonhorera kunze uko kuti iwe ufunge nezvemwana wako. Kana iwe ukaona imwe koshitomu, iwe uchazoda kuvaona vese, saka pasina kutambisa nguva yako, Ini ndinopa iwe neTop 8 Yakapora Wiricheya Zvipfeko yevana neyayo mavhiripu.
[mutserendende = "slide"] [mutserendende]
[/ slide_text] [/ slide] [slide]
Buzz Lightyear uye Spacehip
Astronaut Akagadzirira Kutanga
[/ slide_text] [/ slide] [/ inotsvedza]
Wiricheya yekuwedzera-iyo inoita kuti yako wiricheya ive nehukama
Izvi zvinogoneka sei? Electric Tank-Wiricheya Mbeu dzakauchikwa